smart telecom(smart telecom) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । प्रयोगकर्तालाई धेरैभन्दा धेरै सुविधा दिने उद्देश्यसहित स्मार्ट टेलिकमले आफ्ना ग्राहकसमक्ष अन्तर्राष्ट्रिय कलमा ३० प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट तथा प्याकेजको निःशुुल्क एक्टिभेसन सुविधा ल्याएको छ। यस सुविधासँगै प्रयोेगकर्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय कल अझै सस्तो र सुलभ दरमा प्राप्त हुने विश्वास स्मार्ट टेलिकमको रहेको छ। यो...
स्मार्टले ल्यायो ‘दुईपछि फ्री’ अफर
काठमाण्डौ । नेपालमै पहिलोपटक स्मार्ट टेलिकमले ‘दुईपछि फ्री’ अफर ल्याएको छ। यो अफरअन्तर्गत स्मार्टबाट स्मार्टमा फोन गर्दा मात्र पहिलो २ मिनेटको शुल्क मुख्य ब्यालेन्सबाट काटिनेछ। त्यसपछि २ मिनेटको सबै अनलिमिटेड कुराकानी निःशुल्क हुने कम्पनीले जनाएको छ। स्मार्ट प्रयोगकर्ताले यस अफर प्रयोग गरी आफ्ना परिवारजन, आफन्तजन तथा...
काठमाण्डौ । स्मार्ट टेलिकमले सिन्धुपाल्चोक र स्याङ्जामा बाढीपहिरोबाट सिर्जना भएको कठिन परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै त्यहाँका सम्पूर्ण स्मार्ट प्रयोगकर्तालाई १०० रुपैयाँका दरले ब्यालेन्स उपलब्ध गराएको छ। कम्पनीले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रका आफ्ना प्रयोगकर्तालाई ब्यालेन्स उपलब्ध गराएको...
काठमाण्डौ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा रहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सरकारले लागू गरेको लकडाउन (बन्दाबन्दी)को समयमा समस्यामा परेका ग्राहकहरुका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । बन्दाबन्दीका कारण फोनमा ब्यालेन्स नभएका (रिचार्ज गर्न नपाएका) प्रयोगकर्ताका लागि राहत प्याकेज...
काठमाण्डौ । स्मार्ट टेलिकमले आप्mना ग्राहकहरुलाई घरमै बसी कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्ने यस देशव्यापी प्रयासमा सहभागी हुन थप प्रेरित गर्दै विभिन्न सेवा तथा अफरहरु ल्याएको छ । यस संवेदनशील घडीमा ग्राहकहरु अत्यावश्यक काम बाहेकका लागि घर बाहिर निस्कन नहुने आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न अतिरिक्त सेवाहरु ल्याएको हो । स्मार्ट टेलिकमका...
रु. २०० सम्मको सापटी सुविधा दिन दूरसंचार प्रदायकहरुलाई प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाण्डौ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई कुनै सेवा शुल्क नलिई २०० रुपैयाँसम्मको सापटी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले देश पूर्ण लकडाउनमा रहेको अवस्थामा दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुले कम्तीमा १ महिनासम्म आफ्ना ग्राहकरुलाई यस्तो सुविधा दिनुपर्ने निर्णय भएको...
बडादशैंमा स्मार्टका तीन अफर: ९९ पैसामा सबै नेटवर्कमा कलदेखि सस्तोमै भारत फोन गर्न सकिने
काठमाण्डौ । यो दसैंलाई बडा तरिकाबाट मनाउन स्मार्टले बडा योजना सार्वजनिक गरेको छ । बडा दशैंको अवसरमा स्मार्टले तीनवटा भव्य अफरहरु सार्वजनिक गरेको हो । ती अफर यसप्रकार छन् : दसैं भ्वाइसः यस बडा अफर अन्तर्गत केवल ९९ पैसामा सबै नेटवर्कमा कुरा गर्न सकिन्छ । रु ९९ मा ३० दिन मान्य भएको १०० मिनेट टकटाइम (सबै नेटवर्कमा) पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।...
स्मार्ट टेलिकमद्वारा साथी सिम सार्वजनिक, प्रतिमिनेट २५ पैसामा कुरा गर्न सकिने
काठमाण्डौ । स्मार्ट टेलिकमले हालै आफ्ना नयाँ ग्राहकहरूका लागि स्मार्ट साथी सिम सार्वजनिक गरेको छ । यो स्किम अन्तर्गत मात्र रु. ९९ मा दुईवटा स्मार्ट साथी सिम प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै यी दुई स्मार्ट साथी सीमबीच मात्र २५ पैसा प्रतिमिनेट(करबाहेक) एकआपसमा कुरा गर्न सकिने स्मार्ट टेलिकमले जनाएको छ । यी दुवै स्मार्ट साथी सिममा...
स्मार्टका नयाँ डाटा र भ्वाइस प्याक: रु. ९ मा दिनभरि कुरा गर्न सकिने
काठमाण्डौ । स्मार्ट टेलिकमले हालै आफ्ना नयाँ तथा विद्यमान ग्राहकहरूका लागि नयाँ डाटा तथा भ्वाइस प्याकहरू सार्वजनिक गरेको छ। यस अन्तर्गत २०० एमबी डाटा मात्र रु ९ रुपैयाँमा १ दिनका लागि मान्य भएको प्याक खरिद गर्न सकिनेछ । साथै स्मार्टको अनलिमिटेड भ्वाइस प्याकअन्तर्गत (स्मार्ट टू स्मार्ट ) रु ९ मा १ दिन र रु २९ रुपैयाँमा ७ दिन कुरा...
एसईई सकेका विद्यार्थीलाई स्मार्टसेलको उपहार: रु. १ मै सीम कार्ड, १५०० एमबी डेटा फ्री
काठमाण्डौ । स्मार्ट टेलिकमले स्टुडेन्ट सिम अन्तर्गत विशेष योजना प्रस्तुत गरेको छ । यस योजनाअन्तर्गत कम्पनीले एसईई २०७५ मा सहभागी विद्यार्थीहरुलाई मात्र रु. १ मा स्टुडेन्ट सिमकार्ड उपलब्ध गराउनेछ । यो सिमकार्ड लिन विद्यार्थीले एसईई प्रवेशपत्रको फोटोकपीसहित आवश्यक कागजात प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । स्मार्टले उपलब्ध गराएको,...
स्मार्टको सेवा अब ४५ जिल्लामा बिस्तार, इन्टरनेटको स्पीड अरु भन्दा तेज !
काठमाण्डौ । स्मार्ट टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीले आफ्नो नेटवर्क ४५ जिल्लामा बिस्तार गरेको छ । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, पोखरा, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, विराटनगर लगायत नेपाल अधिराज्यका आधिकांश प्रमुख शहरहरुमा स्मार्टको सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ । यो विस्तारसँगै कम्पनीको फोरजी सेवा अब १९ जिल्लामा, टुजी सेवा २६ जिल्लामा पुगेको...
स्मार्ट टेलिकमले पनि ल्यायो इजीलोन अफर, ब्यालेन्स रु. १ भन्दा कम भएपछि लिन सकिने
काठमाण्डौ । स्मार्ट टेलिकम कम्पनीले इजिलोन अफर प्रस्तुत गरेको छ । यससँगै स्मार्टका ग्राहकहरुले आफ्नो ब्यालेन्स रु.१ वा सोभन्दा कम भएको अवस्थामा *129*10# डायल गरी रु. १० को ब्यालेन्स प्राप्त गर्न सक्नेछन्। रु. १ वा सोभन्दा कम भएको खण्डमा सहजै लोन प्राप्त गरी आफ्नो कुराकानीलाई निरन्तरता दिन ग्राहकले सकून भन्ने उद्देश्यले यस्तो अफर...
सुआहारासँग स्मार्ट टेलिकमको सम्झौता
काठमाण्डौ । स्मार्ट टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीले यूएसआइडीद्वारा प्रवद्र्धित सुआहारा सेकेण्ड कार्यक्रमलाई सहयोग प्रदान गरेको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत सुनौला १००० दिनका आमाहरुका लागि प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श प्रदान गरिएको बताइएको छ । स्मार्ट टेलिकम तथा हेलेन केलर इन्टरनेशनलद्वारा प्रबद्र्धित सुआहारा सेकेण्डबीच स�...
काठमाण्डौ । स्मार्ट, टेलिकम कम्पनीले हालै आफ्ना ग्राहकहरुलाई डबल डाटा अफर प्रस्तुत गरेको छ । यस योजनाअन्तर्गत स्मार्टको डाटा खरिद गर्दा वा रिचार्ज कार्डको खरिदमा डबल डाटा प्राप्त गर्न सकिनेछ । अब स्मार्टको कुनै पनि डाटाप्याक खरिद गर्दा ग्राहकले डाबल डाटा प्राप्त गर्नेछन् । ५०० एमवि, १ जिबी, २ जिबी र ५ जिबी डाटा प्याकमध्ये जुन प्याक...
काठमाण्डौ । ग्राहकहरुका लागि सहज एवं सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित, स्मार्ट टेलिकमले हालै न्यूरोडको पाकोमा आफ्नो नयाँ स्मार्ट सेन्टरको स्थापना गरेको छ। यही सोमबारका दिनदेखि काठमाडौंको मुटु पाकोमा प्रारम्भ गरिएको स्मार्ट सेन्टरबाट स्मार्टका ग्राहकहरुले स्मार्टका सम्पूर्ण सेवाहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस सुविधा सम्पन्न...